Kuyinto umkhuba omuhle uyawagcina amakhophi agade umonakalo efonini yakho njalo. Ngoba awazi ukuthi uma ngeke uludinga. Isibonelo, ukhula lwenkohlakalo egcwele efonini yakho, agqoke a ROM eyingozi, ungalahlekelwa idatha yakho ezibalulekile.
Kulesi okokufundisa, sifuna ukwethula 4 izindlela isipele ifoni yakho Android.
Kopisha Data Computer
Sebenzisa isevisi ye-Google
Sebenzisa zenkampani yangaphandle App
Sebenzisa Ucingo Dlulisa Software
Method 1: Kopisha Data Computer
Njengoba ifoni Android kungenziwa agibele amahhashi njengoba sangaphandle hard drive kukhompyutha, uma uxhuma ifoni yakho ye-Android ku-PC nge-USB cable, uzobona Idrayivu entsha e le Ikhompyutha Yami. Vula futhi uzokwazi ukufinyelela kubo bonke amafayela akho. Khona-ke ukopishe bese unamathisela wonke amafayela kwifolda ku computer yakho.
Inothi: Be-Mac, udinga ukufaka Ukudlulisa Ifayela ye-Android on Mac.
Method 2: Sebenzisa Izikhungo Backup-Google
Google inikeza elula kakhulu Auto Service Backup. Ungakwazi isipele idatha nezilungiselelo ku-akhawunti yakho ye-Google.
Iyiphi idatha nezilungiselelo kuzokwenziwa isipele
Ikhalenda kanye nezilungiselelo
Amanethiwekhi e-Wi-Fi & amaphasiwedi
Isikrini sasekhaya wallpapers
Izinhlelo zokusebenza ezifakiwe nge-Google Play
amasethingi esibuko (ukugqama & Ukulala)
Ulimi &izilungiselelo wokufaka
Izinyathelo isipele idatha yakho usebenzisa i-Android Backup Service
1. Vula idivayisi yakho Izilungiselelo
2. Thinta isipele & Hlela kabusha
3. Hlola "Sekela ngokulondoloza idatha yami."
Ungase ubuze, kuthiwani izithombe nomculo? ningakhathazeki, ungase futhi isipele izithombe, imiqophi, amafayela, nomculo kusuka kudivayisi yakho usebenzisa i-akhawunti ye-Google ngezinye izindlela.
1. Ukuze izithombe, imiqophi, ungasebenzisa Isipele ngokuzenzakalela ukuze ulondoloze ngokuzenzakalela kuze nabo ku-akhawunti yakho ye-Google. Qinisekisa ukuthi Isipele ngokuzenzakalela inikwe amandla efonini yakho.
2. Ukuze amafayela namafolda, sicela uye ku-Google Drive (drive.google.com).
3. Ukuze umculo, ungalanda futhi ufake Umphathi Womculo kukhompyutha yakho, futhi ulisebenzise ukuze ulayishe amafayela womculo wakho ku-Google Play.
4. Ukuze SMS kanye Call izingodo, ungafaka SMS Backup + Lokusebenza. Kuyinto ethandwa kakhulu nge 4.4/5 Isilinganiso ku-Google Play.
Well, -Google empeleni inikeza izindlela ezahlukene ukuze isipele idatha yakho. Kodwa zingavumi uma ufuna ukwenza isipele yonke idatha yakho. Ake sibone ezinye zezindlela kuwusizo kakhudlwana.
Method 3: Sebenzisa zenkampani yangaphandle App
Ungakwazi isipele cishe konke efonini yakho abanye izinhlelo zokusebenza ezikhokhelwayo third-party (impande edingekayo). Lapha sizobe ukwethula wena 3 Izinhlelo zokusebenza, futhi bonke babe version khulula:
Titanium Isipele Key PRO
Sicela uvakashele isixhumanisi ngenhla ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa.
Method 4: Sebenzisa Ucingo Dlulisa
Okokuqala, sicela ulande bese ufaka Ucingo Dlulisa. It has Windows ne-Mac version.
Hola isofthiwe ukudluliswa. Lapho ukuxhuma ifoni yakho ku-PC yakho, uzobona iwindi ngezansi. Chofoza Isipele Hambayo yakho,
Nge Ucingo Dlulisa, ungakwazi isipele oxhumana nabo, SMS, Izinhlelo zokusebenza, alalelwayo, imiqophi, izithombe, Call izingodo kanye amakhalenda. Hlola labo okuqukethwe ofuna isipele futhi ngokuchofoza Qala Dlulisa.
Ngephutha, ifayela yokusekelayo uyakusindiswa ku-C:\_Abasebenzisi Administrator Imibhalo Wondershare MobileTrans Backup. Ungashintsha ugcine endleleni Izilungiselelo.
Inothi: Uma ufuna ukubuyisela ifoni yakho. Hola isofthiwe bese ukhetha Buyisela Kusuka Izipele > MobileTrans, Isofthiwe ngeke bona amafayela yokusekelayo kukhompyutha ngokuzenzakalelayo. Hlola konke okuqukethwe ufuna ukubuyisela bese uchofoza Qala Dlulisa.
Posted on Agasti 26, 2015 September 4, 2015 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi Android, isipele
Langaphambilini post Previous: Indlela baqede ifoni yakho Android ne-tablet
Next post Next: Indlela Bethela a-Drive USB Mahhala